Emirates hama itsva ine hutano muSouth Africa inonzi Cemair
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Emirates hama itsva ine hutano muSouth Africa inonzi Cemair
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kuvakazve • South Africa Breaking News • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Cemair muSouth Africa ikozvino ine hama hombe ine hutano muDubai: Emirates Airlines
MaSouth Africa-based Cemair (5Z) anoshanda epamba uye epasirese vafambi ndege, pamwe neye charter ndege. Mahofisi makuru enhandare yendege nenzvimbo yendege iri muJohannesburg OR Tambo International Airport (JNB). Nzvimbo dzendege dzinosanganisira Bloemfontein's Bram Fischer Airport (BFN), Cape Town International Airport (CPT), Margate Airport (MGH), Sishen Airport (SIS) uye Plettenberg Bay Airport (PBZ). Ngarava dzendege dzine ndege makumi maviri, kusanganisira Bombardier CRJ-20, Bombardier Dash 100 uye Beechcraft 8D ndege. Ndege dzakagadziriswa nezvose zvigaro zveEconomy Kirasi.
Emirates Airlines inoidaidza danho rekutsigira kukwidziridzwa kwemabasa mushure mekusimudzira masevhisi avo ekufambisa kuSouth Africa. Emirates yakasaina chibvumirano cheinternet neCemair icho chinovhura kubatana kune dzimwe nzvimbo nhanhatu muSouth Africa kuburikidza negedhi renhandare yendege yeJohannesburg neCape Town.
Iko kudyidzana pakati peEmirates neCemair kunosanganisirawo akati wandei emahara ezororo anoitirwa chete neCemair.
Izvi zvinoratidza kudyidzana kwekutanga pakati pendege dzese pamwe neEmirates 'yechina ndege yekudyidzana muSouth Africa.
Kubva Emirati yakatangazve ndege kubva kuDubai kuenda kuJohannesburg munaGunyana, kurongeka pakati peEmirates neCemair kunosanganisira nyore kweimwe tikiti yetikitori ine kuenderera mberi kunyorera uye kutakura mitoro kubva kuJohannesburg neKapa kuenda kuBloemfontein, Kimberley, Margate, Durban, Hoedspruit, Plettenberg Bay, George, neSishen.
Adnan Kazim, Chief Commerce Officer, Emirates Ndege yakati: “Tinodada kudyidzana neCemair uye tinotanga chibvumirano chedu chemasline. Iwo matsva maCemair zvinongedzo zvinopa vatengi vedu mikana yakatowanda yekufamba zvisina tsarukano munzvimbo zhinji dzinozorora dzekuSouth Africa, kuwedzera kune imwezve bhenefiti yekubatanidza kune mapoinzi eCemair anoshandirwa chete Margate nePlettenberg Bay.
Kubatanidza manetwork edu kunosimbisa kuzvipira kwedu kupa vatengi vedu mikana yekuwedzera yekufambisa, kunyanya kune avo vanoda kusangana nezvinodiwa zviripo muSouth Africa, pamwe nevafambi vachironga mafambiro matsva. Tinotarisira kushanda pamwe chete nekusimbisa hukama hwedu. ”
Miles van der Molen, Chief Executive Officer weCemAir akati: “Tinofara kudyidzana neEmirates Airline, izita rakafanana nehunhu uye runako. Chibvumirano chedu chemasline chinopa vatengi vedu mukana uye nekuchengetedza sezvo ivo vachigona ikozvino kusangana kubva musende nendege huru yepasi rese yendege inoyevedza. "
Sezvatinoenderera mberi nekuwedzera kwedu panguva yepashure -Covid yekudzosa nguva tinoona kuti ikozvino kupfuura kare kudyidzana kwakakosha pakubudirira kwedu. Kushanda nevatungamiriri vemusika seEmirates Airline kumwe kuratidzira kwekuzvipira kwedu kune vatengi vedu kuti vape sevhisi yakanakisa uye kukosha. ”
Vatengi vanogona kunyorera mafambiro avo pa emirates.com, emahofisi ekutengesa eEmirates, uye vamiriri vekufamba.
Emirates yakawedzera mashandiro ayo kuenda / kubva kuSouth Africa kutanga kwemwedzi uno uye pari zvino iri kushanda nendege gumi neshanu pasvondo kuenda kuSouth Africa kuburikidza negedhi rayo Johannesburg, Cape Town, uye Durban. Iyo yendege inoenderera mberi nekuvakisa zvakachengeteka network yayo yepasirese, ichibatanidza vatengi kuenda uye kuburikidza neDubai kune anopfuura 14 nzvimbo.
Ndege yange ichiwedzera tsoka dzayo kuSouth nekumaodzanyemba kweAfrica kuburikidza nekuvandudza kudyidzana kwayo kwepakati nepakati neSouth Africa Airways, Airlink, Cemair neFlysafair, ichityaira dzimwe nzira dzekubatanidza dzinopa bhenefiti yakakura kune vatengi vayo, nepo ichitsigira kudzoreredzwa kwekufamba uye indasitiri yekushanya.
CemAir Ltd. Ndege yakazvimiririra inoshanda muSouth Africa iyo inoshandira nzvimbo dzakashanyirwa nevashanyi nemaguta emabhizimusi akakosha, pamwe nekuhaya ndege kune dzimwe nendege muAfrica uye Middle East. Ndege iri muJohannesburg
Cuthbert Ncube, Sachigaro we African Tourism Board inogamuchira kudyidzana kutsva pakati peDubai-based Emirates neSouth Africa based CemAir